Hlela ukusebenza - China Kingswel Imishini
Sanibonani bangani, siqala ukusebenza namhlanje. Siyabonga ngokusisekela kwakho, siyethemba sobabili singaba nonyaka omuhle.
Isikhathi Iposi: Feb-20-2021
Kingswel ilungele iqhaza 201 ...
Kingswel uya iqhaza 2015 Chinaplas e Guangzhou. Isikhathi embukisweni kusukela ngo-May 20 kuya ku-May 23. Inombolo yethu idokodo kuyinto 11.1 S65. Ithemba ukubona amakhasimende ethu amasha namadala khona!